श्रीमती सात प्रकारका हुन्छन्, तपाईको कुन प्रकारकी ? – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 Last updated Apr 24, 2018
४. मातुसम (आमा जस्ती) श्रीमती आमाले छोरोको हित चाहे जस्तै सँधै श्रीमानको हित चाहने हुन्छे । प्राप्त धनलाई राम्रोसित सनुम्हालेर राख्छे । यस्ती श्रीमती सदाचार युक्त भएकीले मरणपछि स्वर्णलोकमा गएर सुख भोग गर्छे।
माथि उल्लेखित सात प्रकारका श्रीमतीहरुको वर्णनपछि भगवानले सुजातासित सोधे, सुजाता, लोकमा यी सात प्रकारका श्रीमतीहरु छन् । यी मध्ये तिमी आफूलाई कुन प्रकारकी श्रीमती मान्छौ ?